AKHRISO: Shan Caqabad oo ka hor imaan kara Madaxweynaha Cusub ee Soomaalida Itoobiya [Faallo] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynaha cusub ee dhawaan loo magacaabay Deegaanka Soomaalida Itoobiya, Mustafe Muxumad Cumar, waxaa horyaalla caqabado waaweyn oo ka hor imaanaya marka uu xafiiska fariisto magaalada Jigjiga.
Caqabadahaas hoggaankiisa cusub ka hor imaan doona ayaa Qormadan ayaan mid mid ugu eegi doonnaa caqabadahaas, waxay yihiin, iyo dhinacyada ay uga imaan karaan, haba ugu horeyso dhaxalkii qaraaraa ee uu ka tegay madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar iyo isbedelka Itoobiya ka socda.
1- Liyu Boolis
– Ciidanka oo aan loo diyaarinin nidaam qumman oo lagu hagi karo, laguna beddeli karo dhaqanki hore ee lagu xanto inay lahaayeen ee ku saleysnaa dilka, dhaca, boobka iyo ku tumashada xuquuqda aadanaha.
– Ciidanka qaar ka mid ah, gaar ahaan saraakiisha ugu sarreeysa oo ah kuwo lagu tilmaamo inay dambiyo badan shacabka ka galeen oo lama huraan ay noqonayso in lala xisaabtamo, ciddi dambi lagu helana sharciga la horkeeno. Qodobkan wuxuu imaan karaa haddii aysan dhicin is cafin iyo dib u heshiin.
– Qaar ciidanka ka mid ah oo weli daacad u ah madaxweynihi xilka ka tagay ee Cabdi Maxamuud Cumar oo diiddan isbeddelka deegaanka ka socda.
2- Qaab dhismeedka degaannada
3- Xiriirka Dawladda Federaalka
Dhinaca siyaasadda la xidhiidha, xiriirka uu maamulka madaxweyne Mustafe a yeelanayo Dowladda dhexe waxyaabaha madmadowga soo gelin karo oo u baahan in aad looga taxaddaro sida go’aannada ay ka midka yihiin magaca deegaanka ee la beddelay DDSI loo beddelay DDS, heesta astaanta deegaanka u ahayd oo lagu beddelay tii hore ee ahayd Soomaaliyeey Toossoo Toossoo iskku tiirsada…, Calanka degaanka ee la beddelay iwm.
Dhammaan qodobbadaa iyo kuwa la midka ah dadka arrimaha gobolka aadka ugu dhuun daloola waxay ku talinayaan in madaweynuhu uu aad uga fiirsado, sababtoo ah tillaabbooyinka qaar waxay keeni karaan inuu xumaado xiriirka uu la leeyahay dowladda dhexe, “maadaamaa arrimahaasi oo dhan inuu sameeyo Cabdi Maxamuud Cumar ay dowladda dhexe lafteeda kaalin ku lahayd”.
4- ONLF iyo Kooxaha mucaaradka
5- Isku dhacyada Oromada iyo Somalida
Previous articleCiidamada NISA oo shaaciyey inay Muqdisho ku qabteen Laba xubnood oo ka tirsan Alshabaab
Next articleDad shacab ah oo magaalada Garbahaarey ku weeraray Wasiir ka tirsan Maamulka Jubbaland